Eurovision 2018-2019, izay rehetra tokony ho fantatrao: daty, toerana ary maro hafa! | Omeo fialamboly aho
Gabriela moran | | Vaovao mozika, mpihira, General, mozika
Toy ny fanao mahazatra, mankalaza ny fetiben'ny hira kanto antsoina hoe Eurovision i Eropa mandray anjara ny mpikambana rehetra ao amin'ny Vondrona Fampielezana Eoropeana (EBU). Fetiben'ny mozika fanao isan-taona miaraka amin'ny mpijery lehibe indrindra eran'izao tontolo izao: Nahatratra 600 tapitrisa ny mpijery eran-tany! Nalefa tsy an-kijanona nanomboka ny taona 1956, ka io no fifaninanana fahitalavitra tranainy indrindra ary mbola manan-kery izy io, ka izany no nanomezana ny festival Guinness Record tamin'ny taona 2015. Ny Eurovision 2018 dia notanterahina tao amin'ny Altice Arena, tanànan'i Lisbon, Portugal tamin'ny 8, 10 ary 12 Mey.
Ny festival dia fantatra indrindra hampiroborobo ny karazana metatra. Vao tato ho ato dia nampidirina karazana hafa toy ny tango, arabika, dihy, rap, rock, punk ary mozika elektronika. Vakio hatrany raha te hahalala izay rehetra nitranga tao amin'ny Eurovision 2018!
1 Lohahevitra sy hevitra ankapobeny Eurovision 2018
1.1 Manasa-dalana 1
1.2 Manasa-dalana 2
2 Zava-misy mahaliana momba ny eurovision ...
3 Miomàna amin'ny Eurovision 2019!
Lohahevitra sy hevitra ankapobeny Eurovision 2018
Ny teny filamatra lehibe dia ny "All Aboard!" adika amin'ny teny espaniola hoe "All on board." ny Ny lohahevitra dia miresaka ny maha-zava-dehibe ny asa an-dranomasina sy an-dranomasina izay maneho lafiny iray lehibe amin'ny toekarem-pirenena. Ny marika dia maneho sifotra, izay mamindra ny soatoavin'ny fahasamihafana, ny fanajana ary ny fandeferana.
Ny hetsika dia notarihin'i Silvia Alberto, Catalina Furtado, Filomena Cautela ary Daniela Ruah. Eurovision 2018 nanana a fandraisana anjara lehibe amin'ireo firenena 43 amin'ny fitambarany! Ny nandresy dia ny firenen'i Isiraely niaraka tamin'ilay hira "Toy" tantanan'ny mpihira israeliana sy DJ Netta Barzilai. Ny hira dia naseho ho iray amin'ireo mpitia loka nandritra ny volana maro talohan'ny festival. Ny festival tsirairay dia misy andiany fanafoanana: semi-final 2 ary famaranana lehibe mandritra ny andro samihafa amin'ny hetsika.
Alohan'ny hanombohan'ny festival dia fanaon'ny olona ny manao ny antsapaka famaranana. Raha toa ka Portugal, Espana, Alemana, Royaume-Uni, France ary Italia dia nandalo automatique tany amin'ny fininal. Ny firenena sisa dia nifaninana hahazoana ny toerany tamin'ny ampahefa-potoana roa tamin'ny 8 sy 9 Mey izay ny Firenena 10 manana vato avo indrindra isaky ny manasa-dalana no niditra tamin'ny famaranana lehibe tamin'ny 12.
Firenena 19 no nisy azy ireo ary ny 8 ho an'ny May. Ny lisitry ny firenena nifaninana tamin'io alina tamin'ny semi-final 1 an'ny Eurovision 2018 dia toy izao:
Firenena 10 ihany no nahazo ny diany tamin'ny famaranana niaraka tamin'ny filaharam-pifidianana manaraka: Israel, Sipra, Repoblika Tseky, Austria, Estonia, Irlandy, Bulgaria, Albania, Lithuania ary Failandy.
Ireto ny hira dimy ankafiziny sy ny vatony:
Kilalao. Mpanakanto: Netta (Israel) - isa 283
Afo. Mpanakanto: Eleni Foureira (Sipra) - isa 262
Mandainga Amiko. Mpanakanto: Mikolas Josef (Repoblika Tseky) - isa 232
Tsy iza fa ianao. Mpanakanto: Cesár Sampson (Austria) - isa 231
La Forza. Mpanakanto: Alekseev (Belarus) - isa 201
ny 10 ho an'ny May ary firenena 18 no nandray anjara, ny mpifaninana dia voatanisa etsy ambany:
Ny laharam-pahamehan'ny firenena 10 niroso tamin'ny famaranana dia toy izao manaraka izao: Norvezy, Suède, Moldova, Aostralia, Danemarka, Okraina, Netherlands, Slovenia, Serbia ary Hongria.
Ny fifidianana 5 voalohany amin'ny lalao manasa-dalana faharoa dia aseho eto ambany:
Izany no fanoratanao hira. Mpanakanto: Alexander Rybak (Norvezy) - isa 266
Mandihiza. Mpanakanto: Benjamin Ingrosso (Suède) - isa 254
Ny Andron'ny Vintana. Mpanakanto: DoReDos (Moldova) - isa 235
Nahazo fitiavana isika. Mpanakanto: Jessica Mauboy (Aostralia) - isa 212
Tany avo kokoa. Mpanakanto: Rasmussen (Danemarka) - isa 204
Anisan'ny tsy ampoizina lehibe amin'ny alina ny fiheverana fa tsy fanilihana an'i Polonina, Latvia ary Malta izay ny hira no anisan'ny ankafizin'izy ireo nandritra ny volana lasa mba hanatontosana ny famaranana ny fifaninanana. Etsy ankilany, ny Eurovision 2018 no fanontana izay tsy nahitana an'i Russia sy Romania mendrika ny famaranana voalohany teo amin'ny tantara.
Ny andro lehibe tamin'ny famaranana dia natao tamin'ny 12 ho an'ny May. Ireo mpandray anjara dia mandrafitra ireo firenena 10 voasokajy tamin'ny ampahefa-potoana voalohany sy faharoa, ankoatry ny firenena enina nandalo mandeha ho azy. Ka totalin'ny 26 ny lalao famaranana nifaninana tamin'ny Eurovision 2018 ary nanome seho tsara ho an'ny mpijery izy ireo.
Ny latabatra fijoroana ho an'ny famaranana Eurovision 2018 raha jerena ireo finaliste 26 dia toy izao:
Kilalao. Mpanakanto: Netta (Israel) - isa 529
Afo. Mpanakanto: Eleni Foureira (Sipra) - isa 436
Tsy iza fa ianao. Mpanakanto: Cesár Sampson (Austria) - isa 342
Avelanao handeha irery aho. Mpanakanto: Michael Schulte (Alemana) - isa 340
Non mi avete fatto niente. Mpanakanto: Ermal Meta & Fabrizio Moro - isa 308
Mandainga Amiko. Mpanakanto: Mikolas Josef (Repoblika Tseky) - isa 281
Mandihiza. Mpanakanto: Benjamin Ingrosso (Suède) - isa 274
La Forza. Mpanakanto: Alekseev (Belarus) - isa 245
Tany avo kokoa. Mpanakanto: Rasmussen (Danemarka) - isa 226
Nova Deca. Mpanakanto: Sanja Ilić & Balkanika (Serbia) - isa 113
Mpanatontosa Mall: Eugent Bushpepa (Albania) - isa 184
Rehefa antitra isika. Mpanakanto: Ieva Zasimauskaitė (Litoania) - isa 181
Famindram-po. Mpanakanto: Madame Monsieur (France) - isa 173
Taolana. Mpanakanto: EQUINOX (Bulgaria) - isa 166
Izany no fanoratanao hira. Mpanakanto: Alexander Rybak (Norvezy) - isa 144
Miaraka. Mpanakanto: Ryan O'Shaughnessy (Irlandy) - isa 136
Eo ambanin'ny tohatra. Mpanakanto: Mélovin (Okraina) - isa 130
Mpandroba ao amin-dry zareo. Mpanakanto: Waylon (Netherlands) - isa 121
Nahazo fitiavana isika. Mpanakanto: Jessica Mauboy (Aostralia) - isa 99
Viszlát nyár. Mpanakanto: AWS (Hongria) - isa 93
Hvala, ne! Mpanakanto: Lea Sirk (Slovenia) - isa 64
Ny hiranao. Mpandika teny: Alfred García sy Amaia Romero (Espana) - isa 61
Rivo-doza. Mpanakanto: SuRie (Fanjakana Mitambatra) - isa 48
Biby goavambe Mpanakanto: Saara Aalto (Failandy) - isa 46
Na Jardima. Mpanakanto: Cláudia Pascoal (Portugal) - isa 39
Tao anatin'ny fiandrasana lehibe, resabe sy lisitr'ireo ankafizinao dia nambara izany ilay hira mandresy lehibe amin'ny alina: Toy! Notontosain'ny DJ / mpihira sy Netta miaraka amin'ny isa mavesatra. Nifantoka tamin'ny kolontsaina Japoney ny zava-bitany, izay niteraka resabe rehefa nanandrana nampifanaraka ny kolontsaina Japoney izy satria ny fitafiana, taovolo ary makiazy dia avy amin'ny kolontsain'i Japon no nanentana azy.
Zava-misy mahaliana momba ny eurovision ...
Ho fanampin'ny fiampangana ny zava-bitan'ny Netta Barzilai, misy hetsika hafa izay nanome be resaka momba ny famaranana. Toy izany ny Fampisehoana SuRie, izay nisy mpankafy nidina an-tsehatra ary naka ny mikrô mba hanehoana ny eritreriny politika sasany dia fantatra ho mpikatroka politika io olona io taty aoriana. Taty aoriana dia nanolotra SuRie fampisehoana averina indray ny komity, na izany aza dia nolavina ny tolotra ary nitohy tamin'ny fandaharam-potoana voalaza mialoha ny fampisehoana.
Amin'ny lafiny iray, Nanivana ny ampahany tamin'ny seho nataon'ny mpifaninana i Sina satria naneho marika na dihy izay ilazana ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy nandritra ny manasa-dalana voalohany an'ny Eurovision 2018. Antony nahatonga ny Nampiato ny fifanarahana nifanaovany tamin'ny gara io EBU io firenena io amin'ny alàlan'ny fanamafisana fa tsy maha mpiara-miasa mifanaraka amin'ny soatoavina ampidirina izay ezahin'izy ireo hampiroborobo sy hankalazana amin'ny alàlan'ny mozika. Ny vokany dia ny fampiatoana ny fandefasana ny manasa-dalana faharoa sy ny famaranana lehibe amin'izany firenena izany.
Miomàna amin'ny Eurovision 2019!
Manana an'i Isiraely ho mpampiantrano antsika manaraka isika! Israel dia nanompo tamin'ny firenena nampiantrano indroa: tamin'ny 1979 sy 1999.
Ny EBU dia nanambara tamin'ny 13 septambra 2018 fa ny tanàna izay handray ny hetsika dia Tel Aviv ho an'ny Eurovision 2019. Hatao amin'ny andro izany 14, 16 ary 18 Mey ao amin'ny International Convention Center (Expo Tel Aviv).
Ny fifaninanana dia hatao ao amin'ny Pavilion 2 an'ny International Convention Center izay manana olona manodidina ny 10 eo. Raha heverina izany zava-misy izany, ny Eurovision 2019 dia hanana fahaizana kely kokoa noho ny fanontana teo aloha tany Lisbonne. Na izany aza, ny iray amin'ireo gazety lehibe indrindra any Israel dia nanambara izany tapakila 4 ihany no hamidy. Izany, satria ny habakan'ny olona 2 arivo dia hosakanan'ny fakantsary sy ny sehatra, raha ny sisa kosa dia natokana ho an'ny Vondrona Fampitana eropeana.
ankapobeny ny fivarotana tapakila dia manomboka eo anelanelan'ny volana desambra sy janoary. Zava-dehibe ny fiheverana fa miovaova isan-taona ny mpizara sy ny vidiny, noho izany dia tokony ho mailo amin'ny vaovao ianao. Ny vidiny antonony dia a salan'isa salan'isa 60 euro isaky ny manasa-dalana ary 150 euro ho an'ny fifaninanana farany.
Aza kivy raha tsy mahazo ny tapakilao amin'ny fihodinana voalohany na faharoa. Koa satria amin'ity karazana hetsika ity dia azo voatokana amin'ny daty akaiky ny hetsika ny tapakila noho ny antony ara-barotra hamoahana ilay hetsika miaraka amin'ny "lany" na "lany". Na izany aza, mba hampitomboana ny fahafaha-manatrika ny fifaninanana dia soso-kevitra hiditra amin'ny klioban'ny mpankafy Eurovision ofisialy satria manana ampahany betsaka amin'ny tapakila natokana ho an'ny mpikambana ao aminy izy ireo. Matetika akaikin'ny sehatra ilay toerana matetika!
Gal Gadot, ilay mpilalao sarimihetsika israeliana malaza dia nasaina hampiantrano an'i Erurovisión 2019, mbola tsy voamarina ny fandraisany anjara.
Misy tanàna telo mety hananana ny toeran'ny mpampiantrano: Tel Aviv, Eilat ary i Jerusalem, ity farany dia nandray anjara tamin'ny toerana roa tamin'ireo fotoana roa nanatanterahana ny festival tao amin'ny firenena iray ihany. Nanamafy ny mpikarakara ny hetsika fa ny Tel Aviv dia mifanitsy amin'ny tanàna amin'ny tolo-kevitra tsara indrindra ho an'ny hetsika, na dia fakan-tahaka aza ireo tolo-kevitra rehetra. Hatreto dia misy ny festival fandraisana anjaran'ny firenena 30.
Amin'ny lafiny iray, misy fihetsiketsehana manohitra an'i Israel ho toerana hanaovana ny fifaninanana. Miatrika a toe-javatra sarotra politika, ka ny antony lehibe mahatonga ny tsy fitovian-kevitra dia ny fijoroany ara-politika sy ny fihetsika nataony tamin'ny firenen-kafa. Ireo firenena toa ny Ny Fanjakana Royaume-Uni, Suède ary Islandy dia mihevitra fa ny fitazonana ny Eurovision ao amin'io firenena io dia fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary manolo-kevitra ny hanilika azy amin'ny hetsika.
Fanampin'izany, ny Namoaka fanambarana ofisialy ny EBU izay nanambara fa ny fiarovana ny hetsika no zava-dehibe indrindra amin'ny fikasana hanohy ny lalany. Ny praiminisitra dia antenaina hiantoka ny filaminana amin'ny lafiny rehetra, ary koa ny fahalalahana mihetsika mba hahafahan'ny mpankafy rehetra maniry ny hanatrika ny hetsika na inona na inona zom-pireneny. Heverin'izy ireo fa manaja ny soatoavin'ny ny fampidirana sy ny fahasamihafana dia zava-dehibe amin'ny hetsika Eurovision ary tsy maintsy hajaina avy amin'ny firenena mpampiantrano rehetra.
Tsy misy isalasalana, ny mozika dia mampivondrona ny olona, ​​ny kolontsaina ary mampifanaraka ny fihetsem-po mba hahafahan'ny vahoaka betsaka hifandray amin'ny alàlan'ny feon-kira sy tononkira. Manasa anao aho hitsidika ny pejy ofisialin'ny Eurovision ho an'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny fanontana 2018 sy ny fivoaran'ny taona manaraka.
Aza hadino ny antsipiriany amin'ny fanontana manaraka fa be ny resaka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Eurovision 2018-2019